Fanonganam-panjakana: dingana voalohany indray!
2009-03-10 @ 22:47 in Politika
Maro dia maro ny zavatra tian-kambara tamin'ity andron'ny 10 martsa 2009 ity nefa izay voasoratra ihany aloha no atolotra. Andro manjombona eo amin'ny fanajana ny sata repoblikana sy demaokratika kely mba ananan'i Madagasikara ny androany. Na tsy hita mivantana aza, fantatra tsara ny tsindry sy ny fandrahonana ho faty nahazo ny minisitry ny fiarovana ny vice-amiral Mamy Ranaivoniarivo tao amin'ny biraony tao. Zavatra voalohany aloha, efa nolazaina ihany omaly fa haka minisitera ny mpitokona. Ataoko fa vonona ny hampiseho ny fahavononany hiasa ny minisitry ny fiarovana matoa tonga teny amin'ny birao fiasany. Ny miaramila mpioko anefa no efa niandry sy nifehy ny Minisitera, indrisy, tafiditra tao anatin'ny fandrika ny lehilahy. Voatery nanasonia ny fametraham-pialana tsy ho minisitra intsony noho ny fanambanana basy efa natohoka taminy. Izany moa no inona fa tsy fanonganam-panjakana mivantana? Nahomby io fanonganam-panjakana io satria azon-dry tamin'ny taratasy ny sonia nanaovana izany fialana tsy ho minisitra izany.
Ny sary nasehon'ny vaovao an-tsary sisa no porofo manambara fa natao tao anatin'ny hery ny fahazoana izany fametraham-pialana izany. Anjaran'ny fitsarana angamba ny milaza na mety araka ny lalàna ilay fametraham-pialana na tsia fa tsy anjarantsika nanatri-maso sy nandre ary mamaky ny vaovao ankehitriny. Nandritra ny tontolo maraina izy no nohidiana birao, sady nohidiana rahateo vavahady fidirana ao amin'ny minisitera tsy nahafahany mivoaka. Efa karazana "gadra" izy izany raha tsy "takalon'aina". Mampalahelo ny mahita fa ny ambany grady indray no mibaiko ny manamboninahitra jeneraly, ary nisy aza ny nandrahona azy, ka teo anatrehan'ny mpanao gazety no nanatanterahana izany fandrahonana izany indray (ankoatra izay tany amin'ny birao any). Maty hasina ny sata repoblikana, mitamberina an-tsaina ihany koa ny fanaon'ny mpampihorohoro any amin'ireny sarimihetsika ireny. Tamin'ireo miaramila hita teny, izay tsy ao anatin'ny tafika misatroka mena (capsat) sy lokon-girady mena dia manaisotra izany amin'ny fanamiany tamin'ny ankapobeny. Ny hany manavaka ny Malagasy amin'ny hafa, dia tsy maika ny hamono avy hatrany ireo manana fitaovam-piadiana.
Ny mahavariana moa dia toa tsy mba naheno izay fanamelohana amin'ny ataon'ireto miaramila ireto mihitsy aho hatramin'izao. Sa azy ireo ny hery ankehitriny dia ny mangina ihany no mety? Izaho kosa hanambara izany: manameloka amin'ny heriko manontolo izao fanonganam-panjakana izao aho. Fanonganam-panjakana araka ny anarany satria manala izay "manjaka" na izay mitondra na/sy mitantana tsy araka ny lalàna sy ny fepetra mifandraika aminy raha amin'ny fiteny ankehitriny. Helohiko satria, sambany aho aloha aho no nandre izany minisitra no ambanana basy izany mba hialany tsy ho minisitra intsony. Io moa no tena mahavariana, ny any an-kafa ny filoha no hanaovana izany... fa ny eto kosa dia ny minisitra. Helohiko satria ho zary fanao indray ny tahaka izao rehefa misy ny tsy mahafaly ireto miaramila ireto. Helohiko satria miseho ho tompon'ny fahefana ny "collectif des sous-officiers" ka tsy maintsy maka alalana aminy sy mifanaraka aminy amin'ny ho fanendrena izay ho minisitry ny fiarovana, araka ny reko aloha izay nosoratako izay. Fikorontanam-pahefana tsy misy toy izay, ary ny toy izao mihitsy no tsy ahatantesako fa raha "mandresy" ity tolona ity, izany hoe efa tafapetrak'izay mitolona ankehitriny vokatry ny tolona izay ataony amin'izao fotoana izao, ny mpitondra ambony eto amin'ny firenena dia izay miasa no ho fatiantoka indrindra fa ny mpandroba sy ny mpangalatra kosa no hihevi-tena hanjakazaka satria tompon'ny tanàna sy tsimatimanota. Noho izany, tsy mandresy mihitsy ny tolona raha tsy ny fifidianana no manambara izany, ny fananganana tetezamita moa dia lalana tsy manara-dalàna sy tsy ara-drariny ao anatin'izany rehetra izany.
Manaraka izany, misy ny haino aman-jery minia na mody tsy mahafantatra ny anton'ny korontana teny Ambatomena. Nolazaina avy hatrany manko fa "andian'olona vitsy" mpanakorontana handrava ny fihetsiketsehana eny amin'ny kianjan'ny 13 mey ireny nifampitoraka tamin'ny mpitolon'ny 13 mey ireny. Ao anatin'ny sokajin'ny "mpilaza ny marina" anefa izany haino aman-jery minia tsy mahafantatra ny hafa sy izay ataony izany. Niniany natao izany mba ho ny marina tapany no ho henon'ny olon-drehetra, marina tsy feno ny minia tsy mahalala ny fikasan'ny hafa efa naseho ampahibemaso (Mahamasina) ka izay hevitra (noforonina) tao an-doha (hanakorontana ireto) no nambara tamin'ny mpijery ho marina. Tsy misy mihitsy anefa ny handrara azy tsy hankeny fa ny azy ny tahotra no be noho ny tsaho malaza loatra tonga any aminy angaha? Raha niainga ny mpiaro ny ara-dalàna teny Mahamasina dia ny hitaky ny hanalana an'i Andry TGV any amin'ny Ambasady Frantsay no antony, sy ny tsy hitsabahan'i Frantsa amin'ny raharahan-tokantranon'i Madagasikara. Mampihomehy indrindra manko raha olona "nialokaloka" teo alohaloha teo no afaka mandehandeha soa aman-tsara eto Madagasikara, afaka mikabary amin'ny famoriana olona eto Madagasikara, nefa mody any amin'ny masoivoho Frantsay rehefa avy eo. Tsy nitsipaka ny vaovao rahateo moa ny fitondrana Frantsay fa dia nilaza ny hanalana azy fotsiny avy eo. Dia io fa feno miaramila mpioko io manodidina ny tranony eny Ambatobe amin'izao fotoana izao.
Heverina avy hatrany ho fihantsiana ny nataon'ny mpanohana ny ara-dalàna raha nanakaiky ny kianjan'ny 13 mey ry zareo. Tsy nisy nahalala akory izay anton-dian'ireto "antokon'olona vitsy" ireto fa ny hoe mitady handrava fitokonana ihany ireto no masaka tao an-dohan'ny mpitolona. Dia nodradradradraina avy eo fa resy tosika ny mpanakorontana, inona anefa no nitranga? Nilefitra hanala an'i Andry tao amin'ny faritaniny i Frantsa! izay no notakian'ny teny Mahamasina. Faharoa, ny famoriana teny Mahamasina dia noheverina ho fivorian'ny ambany tanàna manohana ny ara-dalàna izay mijoro ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe "O.Ba.Ma" na "Olom-BAnona MAlagasy", izay heverina fa ny PDS Guy Rivo Andrianarisoa no nanangana azy. Diso ihany koa izay, fa ireo mpihaino Radio Mada, ireo namaly ny antso ireo. Tsy anatina fikambanana izy ireo fa vondron'olona tsy mahazaka mipetrapetra-potsiny amin'izao toe-java-misy ankehitriny izao. Noho izay fiheverana diso izay indrindra, no nandehanan'ny mpanohana an'i Andry hankeny Ampasapito handoro ny tranon'i Guy Rivo Andrianarisoa, izay efa nodradradradraina matetika teo an-kianja ho lehiben'ny mpanakorontana eto Antananarivo.
Marihina fa tsy tena nisy ny fifandonana sy fifampitorahana teny Andohan'Analakely sy tohatoha-baton'Antaninarenina fa ny fifampihantsiana no betsaka. Teny Ambatomena sy teny amin'ny fiakarana ho eny Ampasamadinika kosa no tena betsaka ny toraka (avy amin'ny mpanohana an'i Andry satria tsy nivonona hanao izany loatra ny avy any amin'ny mpanohana ny ara-dalàna, ary tsy maninona na dia lazainao ho mandainga aza aho) ka izany no namparatra be dia be tamin'ny mpanohana ny ara-dalàna, nefa tsy nisy naharatrana kosa ny avy amin'ny mpitolona. Fahadisoan-kevitra faharoa ho an'ny mpanohana ny ara-dalàna izany. Ny fahadisoan-kevitra voalohany kosa dia ny tokony niakarana teo amin'ny tohatoha-baton'ny PSM taloha (na foiben'ny Pisodia io atsinanan'Ambohitsorohitra io ho an'izay tsy mahalala) fa tsy nizorana kosa tany anaty tonelina ka hatrany amin'ny REX vao miakatra toy ny hamonjy an'Ambatomena. Misy ihany koa ny milaza fa tsy tokony hanao izany fihetsiketsehana manoloana ny Masoivoho vahiny izany ny olona satria toy ny mitady hiditra an-keriny any amin'ny tany hafa izany. Na izany na tsy izany, mahazo vahana be dia be eo amin'ny fahavononantsaina ny mpitolona, ary etsy ankilan'izay kosa... mihakely hery hatrany ny mpanohana ny ara-dalàna tsy mahatanty gidragidra loatra.
jentilisa, 11 martsa 2009 amin'ny 00: 45